Chivhenda - Wikipedia
(Redirected from Venda)
Chivhenda (Vhe: Tshivenda) kana Vhenda, mutauro weBantu unowanikwa kuZimbabwe neAfurika Chamhembe. Chivhenda chinehukama hwuri pedyo ne Chishona kunyanya Chikaranga ne Chindau (zvishoma), nekuda kwazvo zvese Chishona ne Chivhenda chakaita kakufana pakutaurwa uye mashoko mazhinji anoshandiswa zvimwe kunyangwe achigona kupereterwa zvakatisiyanei.
Zvinonzi Chivhenda, ne mitauro ye Chivanhu senge Chikaranga zvakatangira kubva kuChikalanga, asi Chivhenda chaka influwenzwa ne Chipedhi (Sepedi).
1 Bumbiro reMabhi
1.2 Chivhenda ne Chishona
2 Mabviro eruzivo[chinja | edit source]
Chivhenda chinonyorwa chichishandiswa bumbiro re mabhi reChiratini, asi mabhi acho anonyorwa zvichienderana ne mainzwi e Chivhenda.
Mabhi e Chivhenda
Pamusoro pezvo, iriko keruro inogona kushandiswa kunyora Chivhenda. Pane keruro mbiri dzinogona kushandiswa kunyora Chivhenda asi pane imwechete inozivikwa kwazvo inonzi Ditema tsa Dinoko uye muChivhenda unonzi "Luṱhofunḓeraru lwa Mibvumo". Ditema tsa Dinoko ndeye mitauro yese yekuAfurika Chamhembe.
Imwe keruro inonzi Mwangwego yakasikwa na Nolence Mwangwego kunyora mitauro ye kuMarawi uye mitauro yekuChamhembe cheAfurika zve.
Chivhenda ne ChishonaEdit
Chivhenda ne Chishona kunyangwe chichinzwika zvakatifananei zvinonyorwa zvakasiyana, muenzaniso pakunyorwa kweChivhenda "vh" anoshandiswa panoshandiswa "v" muChishona, saka isu patinoti "vanhu" ivo vanonyora vachiti "vhathu". Va na Vha zvinotaurwa zvimwechete sezvinoitwa neChikalanga ne Chishona panoshandiswa Ba na Va zvimwe.
tate, bambo/abambo, atsano
ḓuvha zuva rinotaurwa sokuti "dhuva"
ḓu anotaurwa sekuti "dhu" kuChishona
vha anotaurwa sokuti "va" kuChishona,
tshikolo chikoro Rinotaurwa sokuti "Chikolo"
Chivhenda chagara chichishandisa L.
Tsh anoutaurwa sa "ch"
ndala nzara, zhara
ndo takala ndofara, ndodakara
Kudakara zvinoreva kufara kuChindau.
MuChishona ndino anoumba Ndo
madekwana madekwana, madeko Zvinoreketwa zvimwechete
de anoutaurwa zvimwe sokuChishona
ḓe ane ka-maki pazasi anotaurwa sa "dhe"
vhona ona, vona
thumbu nhumbu, mimba, pamwiri
Swondaha svondo, sondo swo anoutaurwa sa "svo"
Musumbuluwo muvhuro pamwe vaiti musumbunurwo?
Lavhuvhili chipiri rinotaurwa sokuti lavuvili (kureva rauviri)
Lavhuraru Chitatu fungai Chikaranga
vhuraru ndi "vutatu/utatu"
Mabviro eruzivo[chinja | edit source]Edit
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Chivhenda&oldid=95485"
Last edited on 6 Chikumi 2022, at 14:52
This page was last edited on 6 Chikumi 2022, at 14:52.